Izindaba - Ukukhishwa okuphelele kwezabelo ezihlelwa kabusha, amandla aphelele athuthukiswe kakhulu
Ukukhishwa okugcwele kwezabelo ezihlelwa kabusha, amandla aphelele athuthukiswe kakhulu
Enkampanini yeTangshan yamandla kagesi aphezulu kagesi we-porcelain insulator, imishini yokusebenzela isibhonga, ulayini wokukhiqiza usebenza ngokugcwele. Ku-workshop emanzi, ngaphambi kwehlobo, abasebenzi abafake imikhono emifushane babejuluke ngokufutheka, basebenze isikhathi esengeziwe ukwenza ama-oda. Ngaphandle kwendlu yokugcina impahla, isixhumanisi sokulethwa simatasa futhi sihlelekile. Njengoba ilogo ye-BBMG ingabonakala yonke indawo efektri, isiko le-BBMG elinosiko lokusebenza njengoba ingqikithi ihlanganiswe nenhliziyo yawo wonke umsebenzi.
Ngaleso sikhathi, i-BBMG itakule inkampani enamandla kagesi kagesi we-porcelain insulator onqenqemeni lokuqothuka. Eminyakeni emine eyedlule yokuhlela kabusha, i-BBMG inikeze izinkampani ezifaka amandla kagesi aphezulu ama-porcelain insulator ngokusekelwa okukhulu ngokwezimali, ukwakhiwa kweqembu lamathalente, kanye nokuxazululwa kwezinkinga ezishiywe ngumlando, okwenza izinkampani zokuvikela insimbi kagesi ezinamandla aphezulu zifakwe kalula Impi, ukubona ukujika okuhle kusuka ekuqothukeni kuya kwinzuzo.
Idumela elihle le-BBMG Group, ithonya lemikhiqizo yasekhaya neyamazwe omhlaba kanye namandla amakhulu wamakhulu ezigidigidi zemali engenile yenze inkampani ephakeme kakhulu yamandla kagesi we-porcelain insulator yomndeni omkhulu we-BBMG Group ibuyise amakhasimende ngemuva kweminyaka eyisithupha yokuthula ku imakethe yama-insulators wokuthunyelwe okuqondile. Ukwethenjwa kwenkampani kuqashelwa ikakhulukazi yimakethe yeGridi Yombuso enezithiyo zokungena eziphakeme kanye nezidingo eziphakeme zedumela lenkampani nekhwalithi yomkhiqizo. NgoFebhuwari 2018, inkampani yamandla kagesi aphezulu kagesi we-porcelain insulator yawina ibhidi le-State Grid Direct Recruiting Zhangbei Flexible DC Project, iphrojekthi yokuqala yokubonisa ukhiye wasekhaya. IState Grid Pass imele isikhundla senkampani enamandla kagesi kagesi we-porcelain insimbi embonini eqondile yamakholomu we-porcelain eyenziwe ngcono. Kumklamo we-DC wama-Olimpiki wasebusika wama-2022 oguquguqukayo, ukusetshenziswa kwezinkampani ezifaka amandla kagesi we-porcelain high voltage kwaba ngu-50%. Selokhu kwasungulwa ifektri kagesi enamandla kagesi aphezulu, iGrid State yathola ibhidi entsha ephezulu. Igridi yombuso ikleliswe kuqala embonini, kanti imali engenayo yokuthengisa inyuke ngo-102% unyaka nonyaka. I-Electric Porcelain insulator Inkampani iqale kabusha imakethe yensika ye-insulator eyayiphazamisekile iminyaka eminingi, futhi imali yayo yokuthengisa inyuke ngama-70% unyaka nonyaka. Kusukela ngo-Okthoba 2019, inkampani yamandla kagesi aphezulu kagesi we-porcelain ibuyise ngokuphelele wonke amakhasimende ezimakethe ezintathu ezinkulu zemakethe yegridi kazwelonke, imakethe yezindawo ezishintshayo, kanye nemakethe yangaphandle.
Inkampani ehleleke kabusha yamandla kagesi kagesi we-porcelain insulator, ukuze ithuthukise ikhwalithi yokusebenza futhi ithuthukise ukuncintisana kwezimakethe, yaqinisa imizamo yokuphatha ekwehliseni izindleko nasekunyuseni ukusebenza kahle. Enkambeni yokwakha inqubo, khulisa izinga lokusetshenziswa komlilo, unciphise isikhathi sokudubula futhi wehlise ukusetshenziswa kwegesi; ekwakhiweni kwezinsimbi zensimbi, buyisela insimbi engagqwali ngezinto ze-aluminium ukunciphisa izindleko zokuthenga. Njengamanje, ama-porcelains ayizigidi ezi-3 aqondile afakwa emakethe konke kuphephile ukugijima ngezingozi zero. Njengamanje, umthamo wokukhiqiza wenkampani ephakeme kagesi kagesi we-porcelain insulator ubeka isibili ezweni, inqubo yokukhiqiza iba sezingeni eliphambili embonini, ikhwalithi yomkhiqizo iba phakathi kwabathathu abahamba phambili ezweni, kanye nokuncintisana kwezimakethe nomkhiqizo ithonya liyaqhubeka nokwanda.
Isikhathi Iposi: Jul-10-2020